ကြော်ဖို့အတွက် ဘယ်ဆီအမျိုးအစားက အကောင်းဆုံးလဲ? - Lifestyle Myanmar
ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် ဘယ်ဆီကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ? ဆီအမျိုးအစားအများကြီးရှိပေမယ့် သူတို့တစ်ခုစီက မတူညီတဲ့ ဟင်းလျာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဆီရဲ့အနံ့အရသာနဲ့သာ ပတ်သတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောဆီတွေက မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကို ခံနိုင်သော်လည်း တစ်ချို့ဆီတွေက မခံနိုင်ပါဘူး။ သင့်အစားအစာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဂုဏ်သတ္တိတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေလိုတာကြောင့် ကြော်စားဖို့အတွက် ဆီရွေးချယ်ရာမှာ အထူးဂရုပြုသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြလိုပါတယ်။
မီးခိုးအမှတ်က temperature တစ်ခုသို့ရောက်တဲ့အခါ အပြာရင့်ရောင်မီးခိုးတွေ စတင်ထုတ်လွှတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ free ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ များများပါဝင်လေ မီးခိုးစထွက်တာ ပိုမြန်လာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးခိုးအမှတ်က ဘယ်အရာပေါ်မှာ မူတည်သလဲ?
အများအားဖြင့် ဆီကို အစေ့တွေ၊ အခွံမာသီးတွေ၊ သစ်သီးတွေ ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့် ထုတ်ယူပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်အပြီးမှာ ချက်ချင်းဗူးထဲထည့်ရင် သဘာဝအနံ့နဲ့ အရောင်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော cold-pressed oil (သို့) မသန့်စင်ထားသောဆီကို ရရှိပါတယ်။ ၎င်းမှာ အပူမပေးသင့်တဲ့ သတ္တုဓါတ်၊ အင်ဇိုင်းတွေနဲ့ တခြားဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်တဲ့ ဆီဖြစ်စေအောင် အဲဒီဆီကို သန့်စင်၊ အရောင်ချွတ်၊ စစ်ထုတ်ဖို့နဲ့ foreign compounds အားလုံးကို ဖယ်ရှားဖို့ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်နဲ့ အပူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ smoke point ပိုမြင့်ပြီး ကြာရှည်အထားခံသော သန့်စင်ထားတဲ့ဆီကို ရရှိပါတယ်။
ဆီပူလာတဲ့အခါ မီးခိုးမထွက်သင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
မီးခိုးက ပြဿနာကြီးတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ မကောင်းတဲ့အချက်က smoke point အထက်ကို အပူရောက်သွားတဲ့အခါ အဆီတွေ စပြိုကွဲသွားပြီး free radicals နဲ့ Acrolein လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်တွေထွက်လာပါတယ်။ Acrolein ဆိုတာက မီးကျွမ်းအစားအစာတွေကို ညှော်တဲ့ အနံ့၊ စပ်ရှားရှား အရသာပေးတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက မီးခိုးကနေ သင့်ကို မျက်ရည်ကျစေတဲ့ အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆီက သူ့ရဲ့မီးခိုးမှတ်ကို ရောက်ရှိလာတာနဲ့ ကြာရှည်သုံးမရတော့ပါဘူး။ ဆီအသစ်ကို အစားထိုးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သန့်စင်ပြီး – 486 — 489°F . ဒါက ကြော်ခြင်း၊ နှပ်ခြင်း၊ ဖုတ်ခြင်းနဲ့ ဆီမြုပ်အောင်ကြော်ဖို့ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ နေကြာဆီအမျိုးအစား အနည်းငယ်ရှိပါတယ် အချို့က တခြားအမျိုးအစားတွေထက် မပြည့်ဝဆီပိုများပါတယ်။ oleic acid ပါတဲ့ နေကြာဆီမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ မပြည့်ဝဆီတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့မှာ အသားအရေအတွက်ကောင်းတဲ့ ဗီတာမင်အီး ပါဝင်ပါတယ်။
Extra virgin – 320 — 374°F. မြင့်မားသောအပူ (သို့) အလယ်အလတ် ထက်ကျော်လွန်ပြီး ချက်ပြုတ်ဖို့ မသင့်တော်ပေမယ့် ဝက်အူချောင်းတွေ၊ အသုပ်တွေနဲ့ ဟင်းချိုတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။
သန့်စင်ပြီးဆီ — 390 — 470°F. ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ (သို့) အသားကို ပါးပါးလှီးပြီးကြော်ဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မသန့်စင်ရသေးတဲ့ဆီ – 320°F.
သန့်စင်ပြီးဆီ – 450°F ။ ဆီမြုပ်အောင်ကြော်ဖို့နဲ့ ကြော်စားဖို့အတွက် ကောင်းပါတယ်။
သန့်စင်ပြီး ဆီ – 450°F. ဒါက deep frying (ဆီမြုပ်အောင်ကြော်ခြင်း)အတွက် ကောင်းပါတယ်။
၅။ Canola ဆီ
မီးခိုးအမှတ် – 470°F.
မသန့်စင်ရသေးတဲ့ဆီ – ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်
သန့်စင်ပြီးဆီ – ၄၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်။ ဆီပူထိုးဖို့အတွက် ကောင်းပါတယ်။ အုန်းဆီမှာ ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် မကြာခဏ ချက်ပြုတ်တာမျိုးကို မထောက်ခံပါဘူး။
သန့်စင်ပြီးဆီ -၅၂၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်
ထောပတ်သီးဆီက အလွန်မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်မှာ ချက်ပြုတ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဆီတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆီက monounsaturated fats ကြွယ်ဝပြီး oleic acid နဲ့ omega-9 တို့ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း ညီညွတ်ပါတယ်။
မီးခိုးအမှတ် – ၄၂၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်
သူက အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ မီးခိုးအမှတ်နဲ့ ကြားနေအရသာရှိသော universal oil ဖြစ်ပါတယ်။